Adobe ပရိုဂရမ်များ cc နှင့် cs အညွှန်းကိန်းများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Premiere pro cc7နှင့် cs6CS - Creative Suite သည် CC- Creative Cloud ဗားရှင်းခြောက်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
SMOS matrix သည် BSI CMOS နှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ နောက်ကျောတွင် backlight မရှိပါက… nutshell တွင်၊ “ သာမန်” CMOS တွင်အလင်းသည်တူညီသောဘက်မှဆဲလ်များသို့ကျသည်။
Sony Vegas မှာစာတန်းထိုးနည်း ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ထံမှထည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင် Sony Vegas Pro 8.0 အတွက်“ Help” ကိုယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် "ProType Titler" ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမျှတစွာဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကဘာလဲ? အဘယ်မှာရှိသငျသညျကို download လုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဗီဒီယိုဖိုင် mp3real.ru ယခုဖက်ရှင်ထဲကတစ်ခါတစ်ရံဗီဒီယိုမှာသူတို့ရှေ့မှာတောင်ပေါ်၏အနုပညာအရသာမရှိခြင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်တွန်းဖို့မကြိုးစားကြ ...
IFrame AJAX သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး IFrame ဆိုသည်မှာ - ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်စွယ်စုံနှင့်စွမ်းအားအရှိဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်ပါရှိသည့်ပရိယာယ်များအားလုံးနီးပါးဖြစ်သည်။ မမြင်ရသော IFrame ကိုဆာဗာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ လွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သည် ...
ဗွီဒီယိုတစ်ခုထဲသို့စာသားထည့်သွင်းနည်း။ သင်၏ဗီဒီယိုကိုမည်သည့်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူမဆိုကူးထည့်ပါ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စာလုံး - စာသား၊ နေရာကိုကြည့်ပါ၊ သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ - စာသားမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်မည်နည်း ...
လှန်ဖို့ဘယ်လို Sony ကဂတ်စ်ဗီဒီယိုလှန်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? 1 ။ ခြေထောက်တက်2။ မြည်းကို naperd အသေးစိတ်ခြယ်သကြသည်နှစ်ဦးစလုံး zades http://kanst.mediatory.ru/ ယခုငါ Vegas မှာ installed ကြပြီမဟုတ်။ ကျွန်မမှတ်ဥာဏ်ထဲကနေရေးသားနေပါတယ် ...
ဒီဒိုင်ယာနာ Naykova ကားအဘယ်သူနည်း ဘယ်သူ Zaneta? Naykova စိတ်ဝင်စားဖို့ကွန်ပျူတာဂိမ်း letsplei ဖယ်ရှားရာဒိုင်ယာနာ (ဒိုင်ယာနာ Naikova) 2000 တစ်နှစ်တှငျမှေးဖှားဟာအလွန်လူကြိုက်များငယ်ရွယ်ရုရှား videoblogersha ဖြစ်ပါသည်, သူအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်လာသည်နှင့် ...
သင်အလုပ်လုပ်သောအယ်ဒီတာကိုသတ်မှတ်မရကတည်းကဘယ်လိုတစ်ဦးရှင်းပြချက်ပေးရန်, ကောင်းပြီ forehand အပေါ်တတ်နိုင်သမျှသောဗီဒီယို? မြည်းကို reverse သလဲ? အဆိုပါ Sony ကဂတ်စ်။ ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်းအပေါ် Schlknut, right-click, ကယ်နှုတ် ...
AVI ဗီဒီယိုကို Adobe Premium Pro တွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။ ငါသာလိမ်မည်မဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည် Premiere တွင်ကြာမြင့်စွာအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ) File - Export နှင့်ဤအစီအစဉ်သည်မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည် ???? ပထမဆုံးအကြိမ် ...
အသံကဗီဒီယို AVI တိုးမြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဖုန်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဤသည်သံကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အစီအစဉ်များ၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုကအရမ်းတိတ်ဆိတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအစီအစဉ်ကို CoolEdit ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ program ကိုဝန်အသံမပါလျှင် ...
နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်အဘယ်သို့နည်း။ အဘယ်ကြောင့် "ပျက်စီးခြင်း" ဖြစ်သနည်း ဒီတစ်ခါလည်းပိုကောင်း - "လက်ထပ်"? ဒါမှမဟုတ်ပြန်လှည့်လား။ ၎င်းသည်ရုရှားဘာသာ၌လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်လည်းအဓိပ္ပါယ်သည်ရှင်းလင်းသည်)))))) PPC သည်မလွှဲမရှောင်သာအချိန်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်တယ် ...
ဗီဒီယိုဖြတ်တောက်ဘို့အရိုးရှင်းဆုံးအခမဲ့ပရိုဂရမ်ကဘာလဲ? SolveigMM က AVI ညှပ် + MKV လျင်မြန်စွာအရည်အသွေးအရှုံးမရှိဘဲ AVI format နဲ့ဖိုင်တွေတည်းဖြတ်ရန်အခမဲ့ဗွီဒီယိုကိုအယ်ဒီတာဖိုင်များကို။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည် ...
Yu-tuba နှင့်အတူရုပ်ရှင် upload လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဒီတစ်ခါလည်းက။ Orbital အပ်လုဒ်ကိုပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ wa ။ မီတာလုံးဝ youtube က2့ရေးရန် (ssyoutube.com ... turn) နှင့် link ကို YouTube ကိုလိုကျနာဖို့သင်တန်းကိုရှင်းပြ ...
ဒီ MKV ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကဘာလဲ။ ဘယ်ကစားသမားကိုကြည့်လို့ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် MKV သည် format တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဗီဒီယို၊ အသံပါ ၀ င်သောကွန်တိန်နာတစ်ခု (အိမ်ကိုပြောပါ) ... ဒေတာ။ စောင့်ကြည့်သည်
ဗွီဒီယိုကို youtube သို့တင်ရန်မည်ကဲ့သို့ပုံစံပြောင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ AVI, MP4, FLV - ဤပုံစံအားလုံးသည် Youtube ကိုအပြည့်အဝနားလည်သည်။
အိမ်မှာဗီဒီယိုတိတ်ခွေဖျက်ပစ်ဖို့ဖို့ဘယ်လို? သငျသညျဗီဒီယိုရိုက် device ကို USB မှတ်ဖြစ်နိုင်ပြီး, စနစ်ယူနစ်သို့ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်ဝယ်ကြလော့။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကိရိယာတစ်ခု VCR အဆိုပါတိပ်ကက်ဆက်သို့ထည့်သွင်းနေသည်ချိတ်ဆက်ပါ digital လိုအပ်သည်။ သင်က program ကိုဖွင့်လှစ် ...
ဘယ်ကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာဟာ android အပေါ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယို deceleration function ကိုရှိသနည်း android ဖုန်းတွင်? ဒါကမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်? အန်းဒရွိုက်အဖြစ်ဝေးငါသတိရအဖြစ်, မိုဘိုင်း, တက်ဘလက်များအတွက် operating system ဖြစ်ပါတယ် ...
ဘယ်လို Youtube ကိုမှဗီဒီယိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြတ်ကကယ်ဖို့။ ငါ QuickTime Player ကိုအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များအတွက် videoskrinshot ပြုပါ! ကိုယ့်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးလုံးဝအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်ရပြီ ... ယခုတွင်ငါသည်၏အဖြစ်ကိုသိကြဘူး ...
အွန်လိုင်း 1 GB ကိုထက်သီးနှံဗီဒီယိုကအရွယ်အစားနဲ့တူပိုပြီး? အခမဲ့အစီအစဉ်နှင့်ဖြတ်ထားပါ။ အခမဲ့ Video dub http://www.dvdvideosoft.com/ru/products/dvd/Free-Video-Dub.htm 20 ကို MB ထက်လျော့နည်းအလေးချိန်။ ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြဿနာများမရှိဘဲ။ အဘယ်အွန်လိုင်းဘို့ .. ...